Atụmatụ nrite na ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ nhọrọ ntụziaka site na nkwụsị
Isi > Atụmatụ > Atụmatụ ego maka ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ Ejection
03.11.2017 · 0 · Ntinye niile maka November 2017
Taa, anyị nwere usoro nlezianya na nhọrọ ọnụọgụ abụọ nke Ejection. Usoro a dabere na nchikota nke njirimara ma nye gi ohere inweta 85% nke ahia ahia. Nke a ezughi iji nweta uru mgbe nile n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụọgụ nhọrọ ọnụọgụ abụọ.
Nkwekọrịta azụmahịa na ahịa ọnụọgụ abụọ kwesịrị iwetara ezigbo ego na-akwụ ụgwọ. Iji mezuo nke a, onye na-azụ ahịa ga-achọpụta ihe kachasị mma maka ọkwa. Nsogbu a ebe a bụ enweghi usoro usoro cyclical nke okwu - ahịa anaghị emepụta ebili mmiri nke ọma ma ọ bụ usoro ndị na-agbatị usoro. N'ihe odide a na-emepụta ego, a na-emekarị ka ọtụtụ ihe dị iche iche na-agbanwe agbanwe na uru nke akụ na ụba.
Ya mere, a na-eji usoro nyocha usoro dịgasị iche iche akọwa ma chọpụta ọnọdụ nkà na ụzụ bara uru. Ọzọkwa, usoro ihe ngosi na-arụ ọrụ dị ka ihe kacha arụpụta. Anyị na-enye gị usoro maka ịnweta na nhọrọ ọnụọgụ abụọ Ejection. Ngwá ọrụ ngwaọrụ nke ngwaọrụ nyocha na-enye gị ohere ịnata karịa 85% nke akara ngosi. Nke a meghere ohere nke ndị investors ga-enwe mgbe ọ bụla na-agbanye n'ọganihu nke nnukwu mmụba obodo.
Ngosipụta nkà na ụzụ nke usoro
Algorithm maka ịmepụta ihe site na atụmatụ nke ị nweta ọnụọgụ abụọ ọnụọgụ abụọ Ejection dabeere na ojiji nke ọtụtụ njirimara, nke ndepụta gụnyere ọrụ ndị na-esonụ:
4 na-agagharị agafe na ọkwa ntanetị nke Ụgwọ ahịa dị mfe. Maka ha, ịkwesịrị ịtọ oge nke 3 / 6 / 9 / 12.
N'ihe dị elu na ọkwa nhazi Ọdịdị - maka ọrụ a, setịpụ ọnọdụ nke 35 oge na agba agba nke na-akpụ akpụ - edo edo.
Standard MACD oscillator.
Ọrụ RSS na-aga n'ihu na 14 oge, ọkwa 70 na 30.
Na nchịkọta, anyị na-enweta usoro ntinye nke nyocha ahịa ahịa, nke na-enye anyị ohere ịhazi ndepụta kachasị elu nke ihe ntinye amaokwu. Ọ dịkwa ike, dabere na algorithm maka ịkọpụta ihe ngosi, iji mepụta nsonaazụ ahịa nke ọma. N'otu oge ahụ, atụmatụ nke inweta ego ọnụọgụ abụọ Ejection nwere usoro kachasị mfe. Ọ na-enye ohere ọbụna ahịa novice iji dabere na arụmọrụ dị elu n'ahịa. Na nke a bụ na nnukwu ngwaọrụ nyocha.
Atụmatụ ego maka nhọrọ ọnụọgụ abụọ Nhọrọ nhọrọ nke ọnụọgụ ahịa
Iji nweta nsonaazụ ahịa ka ị nweta uru kachasị elu, mepụta ọnọdụ ego na teknụzụ kacha mma maka usoro ahụ. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịhọrọ ọnụọgụ maka ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ nke na-eme ihe ndị a:
Nhọrọ dị iche iche na nnukwu nhọrọ.
Ogologo ego nke ịkwụ ụgwọ na nkwekọrịta.
Ejikọtara n'elu ikpo okwu otu setịpụrụ ngwaọrụ nyocha nke eji na usoro.
Ego kachasị mkpa iji malite isi obodo na ego na nhọrọ.
Ndenye aha nkwekọrịta.
Ọnụahịa ahụ anaghị adabere mgbe mgbanwe ahịa ahịa na-efu.
Ndị dị otú ahụ na-egosi njirimara ga-ekwe ka iji usoro na ngwaọrụ nke usoro ahụ mee ihe n'ụzọ dị irè n'ahịa ọnụọgụ abụọ.
Ihe kachasị mma maka ịzụ ahịa nke ọma na atụmatụ a bụ ọnụahịa onye na-ere ahịa Binomo.
Usoro nkwekọrịta nke Ejection - egosi maka ịzụ ahịa
Ihe ịrịba ama maka mmepe mepere
Maka ndebanye aha n'ahịa Ịkpọ oku - nkwekọrịta na-eji ihe ndị ahụ na-egosi ngwá ọrụ:
N'elu ngwá ọrụ RSI, ngwá ọrụ na-eme ka ndị mmadụ na-emewanye elu.
Na teknụzụ teknụzụ, ọtụtụ usoro SMA gafere n'ogo EMA site na ala ruo n'elu.
Oscillator MACD na usoro ya mebiri ọfụzụ nke ọhụụ.
Ihe ịrịba ama maka mmalite mebiri
Maka ndebanye aha na ahịa nke PUT - nkwekọrịta na-eji ihe ndị ahụ na-egosi ngwaọrụ:
Na ngwá ọrụ RSI na-emepụta ihe, ndị na-agba ọsọ nwere mgbidi dị elu nke iwu.
Na teknụzụ teknụzụ, ọtụtụ usoro SMA gafere n'ogo EMA site na elu ruo na ala.
Oscillator MACD na usoro ya mebiri ọkwa dị larịị.
Wepu oge nhọrọ
Ihe kachasị elu nke arụmọrụ ahịa anyị natara mgbe anyị na-enyocha oge nke oge ọrụ na njikọ ọnụahịa, nke njedebe bụ 5 nkeji. Ị nwere ike iji oge ọbụla maka ịmepụta kandụl maka ihe atụ iji tụlee. Ya mere ị nwere ike iwelie elu ma ọ bụ belata usoro azụmahịa. A na-atụle oge ngwụcha oge na otu ikpe a ga-arụ ọrụ dị ka ọchịchị eluigwe na ala - nke kachasị dị n'usoro usoro amụma bụ oge nke 5 kandụl na-etinyere na chaatị ahịa.
N'iburu n'uche na mmepụta nke usoro usoro, usoro dị elu nke mgbapụta isi ala na nkwụghachi ụgwọ, na oke arụmọrụ nke atụmatụ mgbe ahia site n'usoro iwu ya, onye nwere ike iji nhọrọ dị elu nke ihe ize ndụ 5% nke ọnụọgụ ego. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ akaụntụ ahụ adịghị ekwe ka ị rụọ ọrụ na ọnọdụ a, rụọ ọrụ na nkwekọrịta nwere ụgwọ mbụ.
Usoro Zeno maka nhọrọ ọnụọgụ abụọ
Usoro Zeno maka ọnụọgụ abụọ ...
Atụmatụ maka nhọrọ ọnụọgụ abụọ bụ 2018 kacha mma na nke bara uru
Strategies maka ọnụọgụ abụọ nhọrọ ...
Ụgbọ njem ụgbọelu bụ atụmatụ dị mfe
Ịzụ ahịa na obere ihe dị mfe ...
Binomo nyochaa ezigbo 2017
Ịzụ ahịa na akụkọ banyere ọnụọgụ abụọ nhọrọ 7 September 2017 afọ